Maitiro ekugadzira yako yega tsika Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Mune ino blog, ongororo yakaitwa yekugovaniswa kwakanyanya kwegore, ivo vakatonyorwa mukati maererano nezvamunoda, asi ikozvino tichaenda padanho repamberi uye tiri kuzopa izvi megatutorial inotsanangura nhanho nhanho maitiro ekugadzirisa kugovera kweLinux kugadzira "yedu" yakasarudzika distro. Kana isu tikatevera nhanho, kunyangwe vasina ruzivo vachazokwanisa kushandura distro kune yavo yekuda.
Kugadziridza kugovera hakungoshandi chete kuve nekugoverwa kwakasiyana nekuzorora uye kwechokwadi, asiwo kuita kuti hupenyu huve nyore. Semuenzaniso, patino fomata komputa yedu (kana kana tichifanira kuisa anoshanda masoftware uye software pane akati wandei makomputa), isu tinofanirwa kuisa iyo distro uyezve nekuisa ese anodikanwa software kana zvirongwa rimwe nerimwe. Dai isu taive navo vese pamwechete, izvi zvaisazodikanwa, saka zvaizove nyore. Kunyange tinogona kuva LiveCD nematurusi atinoda pabasa redu ...
1 Maturusi aripo:
1.1 UCK (Ubuntu Yakagadzirirwa Kit):
1.9 Linux Rarama:
1.12 Debian Rarama Mashiripiti:
1.13 Ubuntu Muvaki:
1.15 Muvaki Mutsva:
1.19 Linux Kubva kuScratch (LFS):
2 Zvakakodzera zvinhu:
3 Kuisa iyo virtualization software uye nekuisa iwo chaiwo muchina:
4 Gadzirisa iyo distro:
4.1 Isa / Bvisa software inodiwa
4.2 Kugadziriswa uye chitarisiko
5 Pedzisa basa redu:
5.1 Gadzira iyo .sblive
5.2 Chinja kuIO
Pane zvishandiso zvakawanda zviripo, kubva kune mamwe otomatiki zvakanyanya zvichienderana nezvinyorwa zvinokutendera kuti uite basa nenzira yakapusa, kune vamwe vachishandisa iyo terminal uye kugadzira iyo distro chaizvo kubva pakutanga. Zvinotyisa kwazvo zvandakawana ndezvi:
UCK (Ubuntu Yakagadzirirwa Kit):
UCK pamwe ndeimwe yeanozivikanwa kwazvo. Ichi chirongwa chine graphical interface chinokutendera iwe kushandisa akateedzana ezvinyorwa zvinokutendera iwe kugadzirisa iyo Ubuntu ISO uye zvigadzirwa kuti ugadzire yako tsika kugovera. Iwe unogona kusarudza iyo desktop desktop, kuisa kana kusunungura mamwe mapakeji, nezvimwe.
Remastersys chimwe chishandiso chakanakisa kugadzira magadzirirwo etsika. Inoitendera kuti iiswe pakombuta uye igadzire kopi yecomputer yakaiswa kuitira kuti gare gare iwe uve nechengetedzo yemunhu, pasina kudzoreredza zvese kubva pakutanga kana kuva ne distro ine default mapakeji avanounza.
Vagadziri zvakare chinhu chinonakidza chinotibvumira kuti tigadzire Live kubva kuDebian kana Ubuntu. NaReconstructor iwe unozogona kugadzirisa iyo distro uye kunyangwe kuisa mapakeji nyowani kubva kune base Debian kana Ubuntu system (zvakare zvigadzirwa).
Ongororo ndechimwe chinhu chinobatsira kugadzira yakasarudzika tsika. Iyo ine yakapusa graphical interface iyo inotibvumidza isu kugadzirisa yedu distro nenzira yakafanana neiyo Recosntructor. Ipapo inobvumira kugadzira iyo ISO chifananidzo nemhedzisiro yeCD, DVD kana USB. Mufananidzo wacho unogona kushandiswa seRarama kana kuiswa. Iyo kukamurwa kweRevisor ndeyekuti inogadzirisa kugoverwa kweFedora.
SuSE Studio yemawebhusaiti ayo anotendera iwe kuti ugadzire yako yakasarudzika system yekushandisa kubva pane logo, uye Wallpaper, kumisikidzwa, kuisa mapakeji kubva kuzvichengetedzo uye kunyangwe kusarudza iyo desktop desktop iyo iyo distro ichave nayo Iwe unongoda chete pinda pawebhu uye gadzira account kubva kuGoogle account yako, semuenzaniso, kutanga iyo yekuvaka menyu. Sezvo iwe uchigona kufungidzira, iyo distro ichave yakavakirwa pane yakavhurikaSUSE.
Instalinux.com is online service izvo zvinogona kutibatsira kugadzira base dhisiki yekuchengetedza kana kuva isina kunyanya kurema distro. Iyo yakasarudzika kwazvo uye usatarisira zvinhu zvikuru, asi iri imwe nzira inofanirwa kutaurwa.
Pungi isoftware yekugadzira Fedora spins, ndiko kuti, gadzirisa distro kubva kuFedora base.
Muvaki anotendera iwe kuti ugadzire kugovera kubva gNewSense (Debian uye Ubuntu hwaro). Mune ino kesi maitiro acho ari enhando uye asina graphical interface, anoshanda kubva kunyaradzo nekugadzirisa mafaera.
Linux Live chishandiso, inozivikanwawo seLiLi, uye yakavhurwa sosi, kunyangwe ichienderana mune iyi kesi neMicrosoft Windows. Nayo tinogona kugadzira inotakurika, inotakurika uye inogoneka distro pane USB chishandiso.
Systemback ndiko kunyorera kwakasarudzwa kwedzidziso yedu, saka ndiyo ichave iyo isu yatinonyanya kukoshesa. Izvi hazvireve kuti haushandise zvakasara, unogona kushandisa chero chaunoda maererano nezvido zvako. Izvo zviri nyore uye zvine graphical interface, asi zvinotibvumidza isu kugadzira .sblive uye .ISO mafaera kuti tikwanise kuve neLive yeedu distro kubva kune yekushandisa system iyo yatakaisa pamushini wedu (kana chaiwo muchina). Izvo zvakare zvinokutendera iwe kuti ugadzire ekudzosera mapoinzi, dzoreredza sisitimu, gadzira matsva matsva, nezvimwe.
Hook chimwe chishandiso chinovimbisa kugadzira yako Linux kugovera mumaminitsi gumi chete. Kubva pawebsite yeprojekiti iwe unogona kuwana maPDF anotsanangura maitiro uye kurodha pasuru kuti umise. Tinogona kushandisa Hook kugadzira kugovera kwetsika, kugadzira kopi ye / kumba, kugadzira kopi yeiyo system, uye kugadzira ISO mumutauro wedu ...
Debian Rarama Mashiripiti:
Debian Live Mashiripiti ndeimwezve, imwe GUI chishandiso chekuvaka yako wega Debian Live. Zvakareruka kushandisa, kunyange zvichitendera kushomeka kuita, mukuwedzera kukuganhurira iwe kuDebian. Pakati pezviitiko, sarudza iyo GNOME, KDE kana Xfce desktop nharaunda kana sarudza yekununura mufananidzo, sarudza iyo Boot Loader, mapakeji, nezvimwe.
Kubva kuIO unogona kugadzirisa Ubuntu uye gadzira imwe nyowani tsika ISO ine Ubuntu Vakar. Nenzira yakajeka uye yakapusa, unogona kugadzirisa sosi.list, isa mapakeji nyowani uye mamwe marongero anotungamirwa ne wizard.
ReLinux inokutendera iwe kuti ugadzire iyo itsva ISO kubva kune imwe yeUbuntu iyo yatinogona kushandura panguva yekuita. Kunyangwe chiri chishandiso chakanaka, zvinogona kunge zvisiri zvakanakira vatangi nekuti unofanirwa kushanda kubva kuchiteshi.
Novo Builder ine intuitive graphical interface uye nesarudzo dzakafanana nematurusi akaonekwa pamusoro. Kubva pamufananidzo weUbuntu, Mint, LastOS, uye zvimwe zvigadzirwa, tinogona kugadzirisa zvinyorwa, desktop nharaunda pakati pesarudzo dzatinotipa, kuisa mapakeji, kuburitsa ISO kupisa, yakajairwa ISO, nezvimwe.
Distro share Ubuntu Imager inobvumidza kugadzira Inogoneka Live nekutenda kune ino script yatinogona kumhanya kubva kune iyo terminal kuti tishandise iyo yekugadzirisa uye yekugadzira maitiro. Seizvo zita rayo rinoratidza, rinotibvumidza kuti tigadzire distro inoenderana neUbuntu nekutenda kune yakataurwa .conf faira, tinogona kugadzirisa tsika kusvika tasiya distro kuchido chedu tobva taita iyo .sh kugadzira iyo ISO.
U-Customizer inogona kugadzirisa kugoverwa kweUbuntu kune zvaunofarira, chishandiso chine simba uye chinoshanda. Icho chishandiso chinofunga kutanga kubva kuUbuntu Mini Remix, yakadzikiswa vhezheni yeUbuntu iyo ine zvese zvinodiwa kuti zvishande asi pasina zvinowedzerwa, uye kubva pano kuvaka ISO yedu.
Remastersys chirongwa chakamiswa, kunyangwe ichiri kushandiswa zvakanyanya. Kupindura kunofunga kuve chinotsiva chakoIyo forogo yeiyo yapfuura chirongwa chakagadziriswa uye chinoramba chichigadziriswa, kunyange chiri zvakangofanana.
Linux Kubva kuScratch (LFS):
Linux Kubva Kukanda kana LFS Iyo ndiyo yakaoma nzira asi zvakare inonyanya kugadzirisika uye ine simba pane ese, nekuti iwe unogona kugadzira iyo distro chaizvo kubva pakutanga. Haisi software, asi magwara anotsanangura nhanho nhanho maitiro ekuvaka yako wega Linux kugovera. Kana iwe ukatsvaga mambure, iwe unowana iyi mhando yemanyorerwo maPDF guides muChirungu kana dzimwe shanduro dzekare muchiSpanish. Ndinozvikurudzira, iwe uchadzidza zvakawanda.
Iye zvino unoziva zvakanakira kugona kugadzira yako wega Linux distro uye zvakare ese maturusi uye dzimwe nzira dziripo. Nhanho inotevera ndeyekukupa iwe izvo izvo izvo zvatiri kuzoshandisa kune ino dzidziso. Kugadzira yedu LiveCD, LiveDVD kana LiveUSB, tinoda zvinhu zvakateedzana zvatinonyora ipapo:
Komputa ine Windows, Mac OX X kana GNUX / Linux yakaiswa. Mune yangu kesi ndine Ubuntu, saka ndichazviita kubva kuBuntu.
Virtualization software. Inogona kuve VMWare Workstation kana VirtualBox, ese ari maviri anowanikwa kuLinux. Ini ndasarudza VirtualBox. Imwe sarudzo ndeyekushandisa kugovera kwatinoshandisa pachikwata chedu sechigadziko kana kunyangwe ISO yekuparadzira iyo yatinoda kugadzirisa kuitira kusarudza imwe software inoshanda kubva kumifananidzo yeavo vakaonekwa kare.
ISO yekumwe kugovera Linux yatinozoshandisa sehwaro. Mune yangu kesi ini ndakasarudza yekutangaOS Freya.
Software mapakeji iyo yatinoda kuisa. Semuenzaniso, kwatiri isu tichaisa GIMP, Calligra Suite, Oracle Java JRE, Master PDF Edhi uye Synaptic. Muzviitiko izvi hazvinakidze kuisa madhiraivha, sezvo uri Live kana kuti gare gare uchida kuiisa pane imwe komputa, panogona kuve nekukonana.
Un Wallpaper kuti isu tinoda kuichinja uye kugadzira nharaunda yakasarudzika.
Kufungidzira kubhabhatidza yedu nyowani system. Tichaidaidza kuti LxAOS.
system back kugadzira ISO yedu kana .sblive live.
Kuisa iyo virtualization software uye nekuisa iwo chaiwo muchina:
Zvino ngatidzikei kubhizinesi titsanangure maitiro ekugadzira yedu Live nhanho nhanho. Tichazviita nenzira yakapusa uye nema screenshots nguva dzese kukutungamira kuti urege kupotsa chero chinhu, iwe uchaona kuti hazvina kuomesa zvachose.
Isu tinogadzirira muchina wedu neyakajeka software. Ini ndasarudza VirtualBox kugadzirisa system yedu kubva kwatinozogadzira iyo Live ISO. NeVirtualBox tichakwanisa kumhanyisa imwe muyenzi inoshanda sisitimu (mune yedu elementaryOS) kubva kune yedu inomiririra muchina (Ubuntu). Nhanho yekutanga ndeye kuenda iyo VirtualBox download webhusaiti. Kubva ipapo tinodhawunirodha iyo bhanari inoenderana neyedu yekushandisa system (yeuka kuti kana uine imwe OS, unofanirwa kusarudza pasuru yakakodzera, kana kana wakasarudza VMWare kana imwe sarudzo, yakafanana ...). Iyo ingangoita 60MB uye DEB pasuru iyo isu tichafanirwa kuisa gare gare.
Kuisa iyo .deb, tinokwanisa kubaya-kaviri uye ichavhura iyo Ubuntu Software Center kuti ikwanise kuiisa nekungobaya bhatani paIsa bhatani. Imwe sarudzo ndeye kuvhura iyo neGDebi maneja kuti umise iyo otomatiki. Asi kana iwe uchida kutaipa, unogona kuzviita kubva kune iyo terminal. Fungidzira kuti isu tinayo mune Yekuodha dhairekitori, wobva waisa:
Kana tangoiisa, tichadaro dhawunirodha mufananidzo weanoshandisa system hwaro. Iyo distro yakasarudzwa mune ino kesi ndeyekutangaOS. Unogona kuikanda kubva pawebhusaiti yepamutemo yeprojekti uye woita mupiro kana kubva kune mumwe webhu seSurceForge. Iyo ISO ingori pasi pe900MB. Zvinopera pasina kutaura kuti iwe unogona kusarudza Ubuntu, Mint, Arch, openSUSE kana chero distro yaunofarira… Izvi zvinongoratidzira chete.
Iye zvino tave neiyo ISO yeedu distro uye software yekuita. Inotevera ndeiyi isa iyo distro mumuchina chaiwo. Kuti tiite izvi, tinovhura VirtualBox (kana software yawakasarudza) uye tinya pane bhatani Nyowani kugadzira muchina mutsva. Iwindo rinowoneka richitibvunza zita rehurongwa hwedu. Tinogona kusarudza yatinoda, yekutangaOS kana kuipa zvakananga zita sezvatichazobhabhatidza. Tichasarudza LxAOS. MuRudzi tinosarudza Linux uye muVhezheni isu takasarudza Ubuntu (64-bit), sezvo elementaryOS yakavakirwa paUbuntu uye mune yangu ini ndakatora iyo 64-bit vhezheni.
Kana tikadzvanya Inotevera, inotibvunza huwandu hwe RAM kuti isu tichaisa kumuchina wedu chaiwo. Muchiitiko changu ndasarudza 2GB, sezvo ini ndasimbisa kuti nehuwandu hushoma muchina haushande nemazvo. Uye kana tikadzvanya pane Inotevera tinogona Gadzira diski izvozvi kuti tikwanise kuisa system ipapo. Ipapo tinosarudza VDI VirtualBox Disk Image, semuenzaniso. Chidzitiro chinotevera chinotibvunza kana tichida nzvimbo yakatarwa kuti ichengeterwe, uye nekudaro isingagone, kana nzvimbo ine simba kuti igone kuchinja kana paine nzvimbo yakawanda inodiwa. Unogona kusarudza zvaunoda, ini ndakasarudza saizi yakatarwa nekuti ini handizoshandise muchina wakanyanya kuwanda kunze kwekugadzira iyo Live uye ipapo ndichaidzima. Saizi yakasarudzwa i15GB, kana uchida iwe unogona kusarudza zvimwe.
Kana isu tikadzvanya paKutanga, zvinotikumbira isu kusarudza iyo inoshanda sisitimu kubhoot, kwatiri isu tinosarudza iyo ISO yatakatora pasi ye elementaryOS, kubva kudhairekitori kwatinayo. Asi kutanga ndinoda kunongedzera chinhu chimwe. Isu tinofanirwa kumisikidza (Kugadzirisa) iwo chaiwo muchina, kunyangwe nekukasira kungave kwatogadzirirwa nemazvo. Izvo zvinodikanwa kuti iyo inomiririra kana inomiririra komputa (Ubuntu mune yangu) ine Indaneti, uye kuti iyo yakagadziridzwa muenzi kana yevaenzi system zvakare ine iyo kurodha pasi mapakeji uye kugadzira akakodzera mashandiro. Kune izvi tinoenda kuConfiguration yeVM yedu (Virtual Machine) uyezve kuNetwork chikamu. Tinofanirwa kuve neadapter imwe chete. Isu tinogonesa Adapter 1 kana isiri uye tobva tagadzirisa mhando yekubatanidza yatinoda. Kune dzimwe sarudzo dzinonakidza senge NAT uye Bridget (bhiriji adapta) izvo zvimwe ndidzo dzatinoshandisa zvakanyanya. Vaviri vaizotishandira, asi tiri kuzosarudza NAT. NAT inoreva kuwanikwa kwakananga pakati pemachina chaiwo uye Bridged ndeyemuchina chaiwo uye wemuchina wekubatanidza muchina. Rangarira kuti kune edu ekutangaOS kuve neInternet yekubatanidza, unofanirwa kusarudza "Wired Connection" muchikamu chemanetwork che distro desktop, nekuti nekumisikidza iri paWiFi uye nekudaro haina kuona chero network mune ino modhi ...
Iye zvino isu tinotanga muchina wedu uye chinhu chekutanga chatinozoona ichave nhema dema, mamwe mameseji mameseji uye yekutanga elementOS logo. Mushure mechinguva, isu iyo distro yekumisikidza menyu ichaonekwa. Rangarira kuti kana iwe ukabaya pane chaiyo muchina skrini, iyo inotora icha "yakamisikidzwa" mukati mayo, kuisunungura, unogona kudzvanya Ctrl + Alt.
YekutangaOS Installer inoita senge chinhu chekutanga chainokumbira mutauro uye inotipa sarudzo yekuyedza muhupenyu mode (LIVE) kana Isa, isu zvirokwazvo tinosarudza iyi yechipiri. Izvo zvinobva zvatitaridza zvakateedzana zvezvinodiwa kuti tikwanise kuisa elementaryOS nemazvo: isu takabatana neInternet uye isu tine yakakwana hard disk nzvimbo yekuisa. Tinogona kusarudza sarudzo yekuDownload zvidzoreso nekumisikidza uye Kuisa yechitatu-bato software, iyo yandinokurudzira kusarudza. Tinoenderera ...
Bvisa diski uye gadza yekutanga ndiyo yakasarudzika sarudzo uye iyo yatinofanira kusarudza. Wobva wadzvanya pa Isa izvozvi. Inopa dzimwe sarudzo dzinonakidza kwazvo, asi sezvo isu tichida kugadzira MV kuti tiigadzirise, tinovarega. Idzi sarudzo iLVM yekumhanyisa madhiraivha akaomarara, Dzimwe sarudzo dzekuparadzanisa uye Encrypt yekunyorera zviri mukati ... Asi tinovasiya vasina kusarudzwa.
Nyore? Zvakanaka tinoenderera mberi kusarudza nguva yedu yenguva.
Enderera uye tinosarudza mutauro uye dhizaini kana dhizaini yekhibhodi. Mune yedu kesi Spanish.
Isu tinoisa zita redu uye timu uye mazita evashandisi anogadzirwa, kunyangwe kana tichida tinogona kuzvichinja. Isu tinoisawo password uye tinoisimbisa. Uyu uchava mudzi. Tinogona zvakare kusarudza kutanga otomatiki kana kukumbira password kuti upinde mukati uye kana tichida kunyorera dhairekitori redu pachedu. Kwedu isu tichaisa otomatiki chikamu uye kwete kunyorera. Enderera.
Ikozvino kunouya chikamu chinonyanya kufinha, kunyangwe iyo unogona kutora mukana wekuita zvimwe zvinhu apa ... Inguva yekumirira kuti mafaera anodikanwa kuti atedzwe uye zvese zvinodiwa kuti zviiswe.
Mushure mekumirira, zvakakosha kuti utangezve uye kana zvese zvikafamba mushe, zvatinozoona ndiyo nyowani nyowani desktop desktop Pantheon kubva kune yekutanga elementOS.
Isu tinoenderera nechikamu chechipiri chedzidziso. Muchikamu chekutanga isu takatotsanangudza maitiro ekugadzirira software yekuita uye maitiro ekuisa kwedu kugovera kweLinux mumuchina chaiwo, pamusoro pekupa ongororo yesoftware uye dzimwe nzira dzekugadzirisa yedu yekuparadzira Linux iyo yatiri kupihwa izvozvi. Iye zvino tava kuzotanga neyakagadziriswa saizvozvo uye tinopedzisa kugadzira iyo ISO yeedu Live kana kurarama system yatinogona kuyedza tisina kuisa.
Kune ino dzidziso, zvese zvaunoda ndizvo systemback software, kana iyo yatakasarudza kubva kune iyo isu yatakaisa muchinyorwa chakapfuura uye mapakeji atinoda kuisa mune yedu distro kuigadzirisa. Zvakare, kana iwe uchida kushandura chero marongero, Wallpaper, nezvimwe, ikozvino ichavewo nguva yekuzviita. Zvatichaita kusiya system sezvatinoda muLive uyezve ne systemback, isu tichagadzira kopi yesystem yedu yakaiswa muVM uye voipfuudza kune .sblive uye wozoichinjisa kuita ISO mufananidzo.
Gadzirisa iyo distro:
Isu takakamura chikamu ichi kuita zvikamu zviviri, chekutanga matinozozvipira isu kwazviri gadza uye uninstall mapakeji kusiyanisa kusarongeka kweiyo distro. Iwe unogona kusarudza kubvisa kana kuwedzera zvirongwa zvaunoda, izvi ndezvega uye zviripachena zvinoenderana nezvido zvako ivo vanozove imwe uye imwe. Isu tasarudza kuisa Synaptic, Calligra Suite, GIMP, Java JRE uye Master PDF Edhi, uye isu tichabvisa LibreOffice yatisingazodi nekuda kweCalligra.
Chikamu chechipiri chinoitirwa kusiyanisa gadziriso yeedu distro uye nekuchinja iwo maratidziro nekushandura marongero echidzitiro uye nekuisa nyowani nyowani Wallpaper. Shanduko dzinogona kuve dzakadzama zvakanyanya uye sepachikamu chekutanga, zvese zvinoenderana nezvako zvaunofarira, izvi ndezvekungoenzanisira chete.
Isa / Bvisa software inodiwa
Tinotanga nekuisa Synaptic, sezvo software iyi ichatibatsira kuisa mamwe mapurogiramu zviri nyore. Kuti tiite izvi, kana muchina wedu wekutanga watanga neyekutangaOS uye isu tiri pa desktop, tinogona kuvhura iyo terminal nekunyora zvinotevera:
Iye zvino tinogona kuvhura synaptic (Inotibvunza isu password nekuti inoda rombo) uye woishandisa kuisa kana kusunungura software mune yakajeka uye yakapusa nzira, kunyangwe isu tichigona kuenderera nekuisa kubva kune iyo terminal pasina matambudziko ...
Tinogona kutanga kutarisa Java JRE ine Synaptic Tsvaga uye tsvaga pakati pemapakeji ayo aanowana yakakodzera. Mune yangu nyaya, pachinzvimbo chekusarudza iyo Oracle package, isu tichaenda kunotsigira yemahara software uye isu takasarudza OPenJDK 7 JRE iyo yatinosarudza kuisa uye tichaona kuti patinodzvanya Nyorera kuisa, OPenJDK 7 JRE Musoro haunawo -kusarudzwa, sezvo zvichidikanwa, usanetseke nezve kutsamira, Synaptic ichagadzirisa ivo.
Handei kuCalligra, tinotsvaga muSynaptic uye nekuisa ...
Nhanho inotevera mune yedu kesi ndeye gadza GIMP uye tinoita zvakafanana neCalligra ...
Isu tava kuisa Master PDF Mhariri. Iwe unogona kunge wakacherekedza kuti kutsvaga muSynaptic hakuwani chero chinhu, zvakanaka, isu tinoshandisa izvi kushandisa imwe nzira yekumisikidza uye nokudaro kudzidzira dzimwe nzira. Kuti tienderere mberi tinoenda kuMidori browser inouya mu distro uye iyo yatinowana muDock, tobva tatsvaga «Master PDF Editor» uye tinopinda webhusaiti Code-Indasitiri webhusaiti, iyo sezvatinoona iri software yakabhadharwa, zvakanaka ... Tinodzvanya Download kurodha pasi yazvino vhezheni yeLinux uye inotibvumidza kurodha 32-bit kana 64-bit vhezheni. Isu tinosarudza iyo yekupedzisira, nekuti kana iwe uchirangarira isu takadzikisa elementaryOS kubva ku64. Izvo zvakare zvinokutendera iwe kurodha mabinari .deb, .rpm uye tarball. Kuti uwane zvimwe zvirinani tiri kuenda kurodha pasi .deb (kunyangwe isu zvakare tine sarudzo ye, semuenzaniso, kuivhura neSoftware Center):
Para uninstall LibreOffice, tiri kuzoshandisa yedu inodiwa terminal zvakare, matinozonyora.
Kugadziriswa uye chitarisiko
Zvino regai gadzira mamwe marongero Zvakareruka kuona mimwe mienzaniso kuti izvo zvatinochinja zvinoramba zviri muRarama. Iyo yekumisikidza ichave yakapusa kwatiri.
Tiri kuenda bvisa maikoni ese anouya nekumisidzana mudoko kudzvanya pavari nebhatani rekurudyi rembeva uye kusarudza «Ramba uri mudoko». Isu tinosiya Midori chete, Karenda, Zvirongwa zveSystem, uye wedzera maFaera neTerminal. Kuti uwedzere, ingo enda kuApplications, tsvaga uye uvhure zvaunoda uye kana chiratidzo chayo chikaonekwa mudoko, tinya bhatani rekurudyi remouse uye sarudza "Ramba uri mudoko".
Ipapo tinoenda kuSystem Configuration uyezve kuDesktop, kubva kwatingaite sarudza Wallpaper Tsika muiyo Wallpaper tebhu. Kana chiri chifananidzo chakasarudzika, tinoenda kuseri "Mapikicha" kuti tisarudze Tsika yakasarudzika uye maneja wefaira anovhura kuitira kuti tikwanise kuwana patine mufananidzo wedu. Isu tinosarudza uye takagadzirira.
Pedzisa basa redu:
Kuti tipedze basa redu, isu takatosiya iyo distro sezvatinoida, yakagadzirirwa uye nemapakeji anodikanwa. Iye zvino isu tinongoda kuburitsa yedu ISO Live yekutenda kuchirongwa systemback yatinoisa zvakare muchikamu chino:
Ukaivhura, inokumbira iwe password, kubvira vanoda ropafadzo...
Gadzira iyo .sblive
Mune main systemback skrini isu tinofanirwa sarudza iyo Gadzira Live system sarudzo:
In inotevera chidzitiro tinofanira kusarudza zita, kwatiri LxAOS uye tinya paGadzira nyowani:
Zvino isu takamirira kuti maitiro apedze. Zvinotora chinguva, zvinoenderana nesaizi yemufananidzo. Maitiro acho achapedziswa mumatanho matatu uye kana apedza, tinogona kuenda padanho rinotevera, nekuti iyo Rarama mufananidzo ichave yagadzirwa Akashai.sblive Uye izvo zvaizotibatsira kana tichida kuiisa pane USB tanda. Asi kana isu tichida iyo ISO, tinofanirwa kuenderera nedzidziso ...
Iye zvino, tinodzokera kune huru systemback skrini uye isu tinobvumidzwa chinja iyo .sblive muIO kudzvanya paChinjo kuIO bhatani kusarudza yedu LxAOS mubhokisi riri pamusoro uye kumirira:
Ndokumbira utaure, ipa yako maonero, bvunza kana iwe uine kusahadzika kana kupa kuvandudza kana kugadzirisa. Unogamuchirwa. Muchikamu chinotevera, isu tichaenderera mberi nekugadzirisa kwemuchina chaiwo uye isu tichagadzira iyo ISO yeedu Live ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Maitiro ekugadzira yako yakajairwa Linux kugovera nhanho nhanho
Kutenda nebasa racho
Zvizere unobvumirana naPaco. Dzidziso huru Isaac !!!
Jose Luis Meza Parral akadaro
Yako post yaibatsira kwazvo uye imwe yeakanakisa andakaona kune avo vedu vasina ruzivo rwakanyanya mu linux. Kana mumwe munhu akaomarara, ini ndinoisa fomu rakazara zvishoma nemapakeji asi rakakanganisika nekuti ini ndoda kushandisa KDE Plasma kunyangwe ndaona iyo tutori ini ndaifarira Elementary zvakanyanya uye ndinochengeta ese calligra uye akasununguka hofisi, saka ini ndakaramba ndichigadzira DVD kugara ne maviri chaiwo madhiraivha akaomarara, mune yekutanga Linux ine yayo 14GB + 2GB chinjana uye mune yechipiri chete kuita systemback mashandiro saka ndakafunga kuisa gparted kuti ndikwanise kuita mashandiro angu uye kuitumira iyo pamusoro petiweki
Gadzira kumisikidza kwakatemwa kuitira kuti usazopa akawanda sudo apt-tora sezvo paine akatiwandei mapurogiramu andakabatanidza:
Dhawunirodha kde neon: https://files.kde.org/neon/images/neon-userltsedition/current/neon-userltsedition-20170913-0019-amd64.iso
Isa KDE NEON nekusarudza dunhu rangu uye mutauro wekhibhodi,
sudo apt-tora kuisa nautilus konqueror thunar xfe mc gentoo lfm tuxcmd scite kate okular xpdf k3b brazier acetoneiso geany mypaint makapu makapu-pdf xfce4-screenshooter chioniso openshot amarok audacity ardor abiword bluefish p7zip p7zip-rar p7g rantf nfs gpartmina gpartmina-3 pXNUMXg rantfs-yakazarafs lectern pdfchain pdfmod
sudo apt-tora kusimudzira
sudo apt-tora kuisa dvdrip vcdimager cdrdao subtitleripper mplayer-mafonti akaremara sox ffmpeg mjpegtools vorbis-maturusi
sudo apt-tora kuisa software-zvivakwa-zvakajairika synaptic samba samba-yakajairwa python-glade2 system-config-samba
sudo apt-tora kuisa thunderbird chromium-browser flashplugin-simaki xombrero
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: notepadqq-timu / notepadqq
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: shutter / ppa
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: libreoffice / libreoffice-5-4
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: jonathonf / firefox-esr
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: nemh / systemback
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: ubuntuhandbook1 / ppa
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: haraldhv / shotcut
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: webupd8team / y-ppa-maneja
sudo yekuwedzera-apt-repository ppa: yekutanga-os / yakasimba
sudo apt-tora kuisa notepadqq dvdstyler shutter audacity libreoffice firefox-esr systemback calligra krita scribus shotcut y-ppa-maneja yekutanga-desktop
sudo apt-tora kuisa inkscape gimp gpdftext pdfsam font-maneja inoshandura spice-up kabhukuimposer ebook-mutauri karbon pdfshuffler
sudo apt-tora kuisa bleachbit
sudo apt kuisa munhu-icon-theme oxygen-icon-theme nuvola-icon-theme tango-icon-theme xubuntu-icon-theme ldm-kubuntu-theme gnome-icon-theme lxde-icon-theme
sudo apt-tora -f kuisa
Kana mune imwe yeaya matanho iwe uchida raibhurari inodiwa yanga isipo, wongorora ne
Pakupedzisira, ndakaenda kune mapaneru, ini ndakaenda kumarongero emitauro, ini ndakaisa zvidzoreso zvandisina kuwana uye ndizvozvo, libreoffice yaive zvakare muchiSpanish.
Ndiine bleatch-bit superuser mode ini ndakachenesa zvese zvinyorwa zvandawedzera uye zvimwe zvinhu ne ubuntu tweak akachenesa marekodhi
sudo apt-tora kuchena
sudo apt-tora purge
(Aya akatoiswa ne bleatchbit uye ubuntu tweaker, asi mhanya uone kuti pakange pasina zvikanganiso kana uchivaita sezvo ivo vanotaura mararaibhurari asina kuvandudzwa kana kunamatira)
Ipapo ndakaenderera kuSystemback uye ndizvozvo, ndakatora mufananidzo wekutanga wandakatumira gare gare pamusoro peneti
mushure meizvi yatove yakashata kuti yakawedzerwa nekuti iri nengozi padhuze neepamusoro 4.3 magigs ayo anokwanisa kuisa mufananidzo kuushandura kuita ISO
Kutenda kuzhinji kuna Isaac, namata kana ari shasha pane izvi uye ndinotenda kuti iwe unoburitsa seizvi sezvo akakurumbira mavhidhiyo tutorial gare gare anoita kuti titambise nguva yakawanda kupfuura kuverenga.
Pindura kuna Jose Luis Meza Parral
Ini parizvino "ndinoshanda" nevatatu vacho: Debian, OpenSuse uye Ubntu, vese kumba uye mubhizinesi. Mint, yevanoshandisa novice pane DELL755 zvishandiso. Ndinofanira kutaura Hapana matambudziko! zvese kutanga kwevashandisi uye kwavo kuchinjika. Kazhinji kuiswa kwacho kwakanyatso nyorwa uye kwatinonyatso chinja chimwe chinhu chiri mumvumo.
Iwe waita basa rakanakisa zvakadaro. Kutenda iko kusangana.
Icho chidimbu chekupinda! Waratidza. Zvakanakisa! Ndiri kuda kutenga komputa nyowani uye pamwe pano ndichawana system yandinoda. Pfungwa dzako, ini ndinoshandisa chishandiso choga.
Parizvino ini ndiri kushanda ne / mune seti yemangu magwaro uye magadzirirwo emabatirwo e openbox uye otomatiki ayo, handina chokwadi kana ichienderera mberi sekukwanisa kuvaka iso installer, asi iko kuiswa kunokosheswa ini ndichaongorora iine clma panguva ino chero mamwe magwaro akanaka kwandiri.
Mubvunzo, iwo ekuvandudzwa achiri kutambirwa? Ini ndinofunga iwo achave iwo eiyo base system, mune ino Elementary OS.
Yakanakisa chinyorwa. Ndatenda.
Hwindo Mugadziri Live akadaro
Ndanga ndichishanda pane yakasarudzika Debian-yakavakirwa kugovera kwemakore akati wandei ikozvino. Vhura https://sourceforge.net/projects/wmlive/files/wmlive_0.95.7-2/ shanduro dzinogona kutorwa pasi i386 uye amd64. Ini ndanga ndichishandisa live-kuvaka kugadzira iyo isos. Masosi akaisirwa kuitira kuti chero munhu agone kudzorera iyo ISO sezvavanoda.
Pindura kune Window Mugadziri Live
Makorokoto, makorokoto angu!
Chinyorwa chakakora kwazvo asi nehukuru chaihwo, hachisi chikuru kana zvishoma; Ini handina ruzivo neElementaryOS asi uyu mukana wakanakisa wekuti vese vaedze kugovera uku uye zvakare vatange iyo CUSTOM LXA! :-)
Iwe unofunga kuti maitiro aya anogona kushanda sehupenyu hwekuchengetedza system yeiyo linux system?
Jesu weBaldoma akadaro
Kupinda kwakanaka uye kunokurudzira.
Ini ndinofunga kuchine musoro wenyaya wekukurukurwa uye ndiko "kuchenesa" kwezvakaitika kare, macache, zvichingodaro.
Rega nditsanangure: paunoshandisa bhurawuza kurodha Calligra uye iyo yekumisikidza kuisa / kusunungura mapakeji, chinhu chakajairika ndechekuti nhoroondo dzakanangana uye mafaera ekuchengetedza anoramba aripo.
Ini ndinofungidzira kuti kana usati wagadzira iyo ISO ine systemback izvo zvambotaurwa nhoroondo uye mafaera asina "kucheneswa" kubva ku cache, vanopedzisira vaendeswa kune iyo distro yatinozogadzira. Chokwadi?
Iwe unoziva chero nzira yekuita iyo mhando yekuchenesa?
Pindura kuna Jesu de Baldoma
Instala "bleachbit" inoshenesa iri muzvivakwa, zvirinyore kushandisa uye zvinopedza marara ese anounganidzwa musystem.
Mubvunzo mumwe, mumuchina chaiwo hausi kuisa maAddons? Kugoverwa kwangu kwenzvimbo yangu uye kirasi yayo yecyber ndeiyi:
Kuchenesa iyo bleachbit system, sudo apt kuisa bleachbit. Kurumidza nyore.
Ndatenda zvikuru nemhinduro dzenyu. Ndiri kufara kuti nemupiro uyu ndinogona kubatsira mumwe munhu.
Joaquin Jimenez akadaro
Asi izvo hazvisi chaizvo distro. Icho ElementaryOS inotakura mapurogiramu ako uye marongero nekukasira, asi haisi distro yakadaro; sezvo ichigovana Elementary simaki, uye inoramba yakafanana.
Iko hakuna nzira yekushandura iyo inosimudza uye iyo "e" pakutanga kuti iite zvizere zvigadziriswe uye yakakodzera distro?
Pindura Joaquín Jiménez
Dzidziso yakanaka kwazvo. Ndakazviedza paLinuxMint uye ndakaifarira. Ndingaite sei zvakafanana muManjaro? Ndatenda
Makorokoto pane iyo dzidziso, yakakwana kwazvo.
Izvo chaizvo zvandaitarisira kuita, ndiko kuti, ndine netbook yandinoisa Lubuntu pairi uye iyo yandinoshandisa kubatanidza kumakomputa kuburikidza ne USB-Serial inoshandura. Kuitira kuti software yandinoshandisa ishande pakuwedzera kuve newaini yakaiswa, ndaifanira kumisikidza iyo sisitimu kuitira kuti painopinza iyo USB-Serial inoshandura inoiona se com1 port uye kwete se / dev / ttyS0. Mubvunzo wangu ndewekuti, mushure mekutevera iyi dzidziso uye nekugadzira iyo ISO ye "MILubuntu" yandinayo pane iyo netbook, rudzi urwu rwekugadzirisa rwachengetedzwawo?
Ko ISOs UEFI inoenderana?
Kwenguva yakareba ndashandisa Remastersys (kwandiri chakanakisa) ... ikozvino zvave kuita sekunge budiriro yafa uye hapachina imwe vhezheni yeUbuntu 16.04
Sistemback angave anokodzera- anotsiva iyeye? ISO inogona kuitwa yakananga neSystemback?
ahhh ... nenzira, ini ndakakanganwa mune yapfuura posvo, imwe yazvino imwe nzira yandinofunga ingave iri Pinguy Builder ... kunyangwe pandinoyedza ini ndinofunga inononoka.
Pinguy Builder yakanaka, asi inoita zvinhu zvisina kujairika. Chinhu chekutanga kana iwe ukaisa iyo ISO yakagadzirwa nayo pa desktop, iyo yekumisikidza haibvunze kugadzirwa kwemushandisi. Kune rimwe divi, kana iwe ukaiisa iyo palaptop, kana ikakubvunza iwe, asi haina hanya neyakaiswa data. Ndini dambudziko hombe randinaro naAranLinux, iyo yekumisikidza, handisi kuwana mhinduro yakanaka.
Zviitiko kusvika kuXenial:
- kubva ppa: kranich / remastersys
- iwe unoisa xresprobe_0.4.24ubuntu9_amd64.deb
… Uye ndakagadzirira !!!
PS: Kunyangwe kuve Pinguy Muvaki forogo yeMasvusvuro… inononoka sebhiza remurume akaipa !!!… inononoka kwazvo! Panguva iyo munhu anoenda makumi mashanu %- semuenzaniso-… imwe inoenderera ye50% -uye netariro- neese macores pa13%.
Mhoro Javier, inonakidza kwazvo uye ndingaite sei kuti ndiite ISO yekuparadzirwa kwangu neRemastersys ndobva ndayiendesa?
Edison moya arias akadaro
ino iso iyo inogadzirwa inoisa .. ?? kana iri inotakurika OS?
Pindura kuna Edison Moya Arias
Mery chena akadaro
Wakanakisa mupiro! Ndinokutendai zvikuru, makandiratidza zvakawanda. Ndichazviedza uye ini ndichakufumura iwe zvabuda zvangu. Mubvunzo wangu ndewokuti: kana panguva yekumisikidzwa kweIO (pandiri kubvisa nekuwedzera mapakeji) inofanirwa kuti iyo distro igadziridzwe kana kwete?
Pindura Mery White
Ini ndainyanya kufarira dzidziso, chinhu chimwe chete kana ndine Ubuntu 14 uye ini ndinotova nayo nenzira yandinoda, ini handigone kugadzira mufananidzo kubva kuchikamu changu panzvimbo peicho chaicho kuti ndirege kuchiisa, wedzera iyo mapakeji ini ndinoda uye kusunungura iwo iwo avakange vasina kundishandira zvakare
Pindura kuna EDGAR GARCIA
Makorokoto pachinyorwa ichi, ruzivo rwakakosha kwazvo, rwakakwana uye rwunonakidza.
Ini ndoda kugadzira izvi kugoverwa mu linux kubva ku debian.
yakanakisa posvo yakaiswa mune andinofarira
wakanyanya kutenda nekutivhenekera neruzivo rwako kukwazisa kubva peru (y)
Killo Killo Shiri akadaro
Yakanaka dzidziso. Ini ndashandisa Systemback kugadzira tsika Kubuntu kana Linux Mint ISOs, uye Multisystem kuvapisa kune yekunze hard drive partition, saka ndinogona kuve nemazhinji masisitimu panguva imwe chete.
Ndiri kuyedza Opensuse Tunbleweed uye ndinoshamiswa nekugadzikana kwayo. Asi ini handisi kuwana Systemback maitiro maitiro ekugadzira iyo tsika ISO. Iwe unoziva chero chishandiso kunze kweSUSE Studio?
Systemback inoita kunge isingawanikwe mu .rpm
Pindura Shiri Killo Killo
Ini ndichaita izvi ini ndichaisa iyo. Semuenzaniso ini ndichatora kugovera kuri kutoshanda uye kusingatarisirwe uye ini ndinowedzera iyo nyowani Debian Jessie kana Ubuntu 16.10 repositori, ini ndinowedzera izvo zvinhu zvinodiwa uye ndizvozvo.
Dai iwe waiva nemutsa kwazvo, waigona kutsanangura zvirinani nevhidhiyo mashandisiro eRinuxux? Iko hakuna vhidhiyo muSpanish.
Ini ndinokusiyira email yangu kana iwe ukaita iwo dzidziso Ndatenda zvikuru pamberi.
Ini ndaodhaunirodha debian 8 jessie iso kuti ndiiise pawindows notibhuku 10. Mushure mekubvisa bhuti rakachengeteka uye nekuisa system ndakaona kuti ndakanga ndisina internet yekuwana, isina waya isina kubatana nekuda kwenyaya dzisiri dzemahara muzvinyorwa, zvisingaite kugadzirisa system ine kugadzirisa. Mukupedzisira, ndakatsamwiswa nedebian, ini ndakaisa linux mint 18. Mune ino kesi, pakanga pasina mvumo yekukanganisa iyo inokutadzisa iwe kuva neWi-Fi. Saka ndakamhanya ndichibuda mu debian uye pachinzvimbo linux mint. Anofara kwazvo, asi akagumbuka nekuti yaive isiri iyo yekutanga pfungwa. Dai ndanga ndarava peji rino ndisati ndatanga, ndingadai ndakagadzira yetsika debian iso, iine wifi yakatogadzwa uye isina-yemahara inosanganisirwa muzvinyorwa zveiyo usb-live kiyi. Zvinonyadzisa! Inotevera nguva ini ndinoziva zvandinofanira kuita kuti ndisasangane nedambudziko iri zvakare. Kutenda neakanakisa posvo.
Ini ndangotumira komendi uye hazvioneke. Zvese zvakanaka?
Mhoroi, iwe unoziva chero distro ine izvo chete izvo zvinodiwa kumhanya windows mutambo? zano rangu ndere kugadzira pendrive yemwanakomana wangu kuti atambe pc yangu, nemhando dzese dzemitambo. zvinosetsa
Mhoroi, ndakaita nhanho dzese asi kana ndichiisa paPC haina bhuti zvakanaka. Ndakaedza zvinhu churu uye hapana.
+ inri: Ini ndashandisa chaizvo zvese zvaunotaura mutsananguro.
Chero maturusi kana matanho ekugadzira tsika Slackware iso ????
Julio Escorcia akadaro
Ko zvakadii naIsaka, ndine mubvunzo, kana ndine Red Hat OS yakaiswa muVMware VM uye iyo yekupedzisira yatove yakagadzirirwa sezvandinoda, ndinogona here kuisa iyo systemback mukati mayo uye kugadzira ISO?
Pindura kuna Julio Escorcia
Hazvichashandi,: .. .. iro haribhutu .. mumwe munhu ane mhinduro, ..
Imwe nguva yapfuura ndakamhanyirawo mudambudziko iri ndikarigadzirisa nekubvisa iyo casper package yeiyo yapfuura vhezheni 1.340 ... uye ndiwo mashandiro andaiita, asi haichashandi pamwe neizvozvo ... Pane chero munhu anoziva maitiro gadzirisa dambudziko iro.?
Mazhinji ekushandisa aya haatombovapo ... Chero imwe yazvino / yakapusa mhinduro?
Ndakagadzira tsika Linux Mint 20 iso uye kana ndichiyedza pamakomputa akasiyana ndinowana iko kukanganisa:
(initramfs) / fomati yemombe yakatsanangurwa seaufs uye hapana rutsigiro rwakawanikwa ”
Ndichitsvaga mhinduro ndakawana iri peji:
Ndiri kunetsekana kuisa systemback uye ini handikwanise, pane munhu angandibatsira here?
Jesu Martinez akadaro
Ndine Windows 10, ine VirtualBox 6.0 uye ndine Debian 9.11 inomhanya zvakanaka. Ndine desktop yeGNOME SHELL 3.28, GNOME Classic. Asi ini ndiri kushandisa iyo ARC theme uye yakasarudzika ARC Icons. Uye ini ndaida kuziva kuti ndingaite sei DVD inogona kuiswa pamushini. Uye kana iwe wapedza kuisa, zvinogara sezvo ini ndine yangu chaiyo muchina. Zvakanaka, izvo zvandiri kuedza kuita kugadzira Debian 9.11, kune kwandinofarira senge tsika imwe. Ndakaona chiuru chedzidziso, asi handisi kuwana chaicho, icho chinotaura nezve iyi nyaya yekuchengeta iyo Desktop ine Musoro wandinoshandisa. ARC theme + ARC mifananidzo.
Pindura kuna Jesu Martinez
Handizivi kana nguva yapera…. Ini ndakaisa Systemback nekutevera peji rino: https://www.linuxbabe.com/ubuntu/install-systemback-ubuntu-18-04-bionic-18-10
Zvinoseka, asi bhuku rimwe chete iri https://laboratoriolinux.es/index.php/-noticias-mundo-linux-/aula-linuxera/aula/15185-como-crear-tu-propia-distribucion-linux-personalizada-paso-a-paso.html mifananidzo inosanganisirwa. Mumwe wevaviri akateedzerwa
Pedro sosa akadaro
Zvakanaka kutumira. Ndakatungamirirwa na https://www.personalizarwindows.com/personalizar-linux/ kugadzirisa desktop yangu kunyangwe ichi posvo chichi shanda kunyangwe ichisvetuka zvimwe zvidiki zvinhu nhasi zvinofanirwa kuigadziridza
Pindura Pedro Sosa
Manheru akanaka, ini ndoda kugadzira yangu 32-bit Linux distro asi iyo distro yandinoda kuzvisimbisa nayo yakavakirwa padianian weezy asi ini ndoda kuigadzirisa kuti ienderane nechimaera asi ini handizive maitiro ekuchinja masitoreti tsime, ndakatozviita mu distro asi kana ndichivandudza ini ndinowana mhosho nekuti inopesana nemamwe mapakeji ndingafarire kwazvo rubatsiro rwako ndapota